ရညျးစား ဖွဈတာနဲ့ Fb Password ပေးသငျ့လား
HomeKnowledgeရညျးစား ဖွဈတာနဲ့ Fb Password ပေးသငျ့လား
H July 16, 2021
မွနျမာနိုငျငံက သမီးရညျးစား စုံတှဲတှကေို ကွညျ့ပွီးတော့ လုံးဝ နားမလညျနိုငျတဲ့ အခကျြတခု ရှိတယျ ။
အဲ့ဒါက ရညျးစား ဖွဈပွီ ဆိုတာနဲ့ တယောကျနဲ့ တယောကျ Fb Password အပွနျအလှနျ ပေးကွတဲ့ ကိစ်စပဲ ။ ရညျးစားတှေ ဖွဈကွပွီ ဆိုတာနဲ့ ဒီလို မဖွဈမနေ လုပျရမယျ ဆိုတဲ့ အယူမှားကွီးက မွနျမာလူငယျအတှဲတှေ ထဲမှာ အမွငျရဆုံး အဆိုးဆုံး ကိစ်စတဈခု ဖွဈနသေလိုပဲ ။ လုံးဝ အဓိပ်ပါယျ မရှိပါဘူး ။
ရညျးစားထားတယျ ဆိုတာကို ပွနျစမျးစဈကွညျ့ရငျ အရေးကွီးဆုံး အကွောငျးပွခကျြ (၂) ခုပဲ ရှိတယျ ။ တခုက ပြျောခငျြလို့၊ နောကျတခုက တဈဘဝလုံး အတှကျ ရညျရှယျပွီး လကျတှဲခငျြလို့ ။
တယောကျနဲ့ တယောကျ အပွနျအလှနျ Password တှေ ပေးထားကွတဲ့ စုံတှဲတှကေို ကွညျ့လိုကျရငျ နောကျထပျ ယောကျြားလေး ၊ မိနျးကလေးတှနေဲ့ စကားမပွောစခေငျြလို့ ဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြ ရယျ ၊ နောကျပွီး အဓိက အဆိုးရှားဆုံး အယူလှဲမှု ကတော့ တယောကျနဲ့ တယောကျ ယုံကွညျမှု တညျဆောကျခငျြလို့ ပေးတယျလို့ ပွောကွတာပဲ ။ လုံးဝ အမှားကွီး ။
အဲ့ဒါ ယုံကွညျမှု တညျဆောကျတာ မဟုတျဘူး ။ တယောကျနဲ့ တယောကျ မယုံကွညျဘူး ဆိုတာကို အခကျြပွလိုကျ တာပဲ ။
ပွနျစဉျးစားကွညျ့လေ ။ ကှယျရာမှာ နောကျတယောကျနဲ့ ဖောကျပွနျနမေလား မသိဘူး ဆိုတဲ့ မယုံကွညျတဲ့ စိတျကွောငျ့ ရညျးစားစ ဖွဈတာနဲ့ ဒီ Social Media password ကို တောငျးတော့တာပေါ့ ။
အဲ့လောကျထိ ကိုယျ့တယောကျထဲကိုမှ ခဈြနိုငျပါ့မလား မသခြောတဲ့ ၊ မယုံရတဲ့ လူတယောကျကို ဘာလို့ ရညျးစားတျော တော့မလဲ ။ ရှငျးနတောကို ။
တဘဝလုံးအတှကျ မပွောနဲ့ ။ အခုကတညျးက တခွား မိနျးကလေး၊ တခွား ယောကျြားလေးနဲ့ စကားပွောပွီး ပါသှားမှာ ကွောကျလို့ ဆိုရငျ အခုကတညျးက လမျးသာ ခှဲပလိုကျတော့ ။
ကိုယျ့ကို ခဈြပါတယျလို့ ပွောထားတဲ့ ယောကျြားက နောကျထပျ မိနျးကလေးနဲ့ စကားပွောလိုကျတာနဲ့ ပါသှားမယျ့လူ လို့ ထငျနရေငျ အစ ကတညျးက တှဲမနနေဲ့ပေါ့ ။ ကိုယျနဲ့ မထိုကျတဲ့လူ ၊ ကိုယျ့အဆငျ့ကို မမှီတဲ့သူလို့ စိတျထဲမှတျပွီး စောစော စီးစီး လှတျပေးလိုကျ ။ နောကျတဈယောကျ ရှာဖို့တောငျ အခြိနျ ရသေး ။
ကိုယျ့ဘဲကိုတော့ ယုံပါရဲ့ ။ သူ့နားက စနိုကျကွျောမ တှကေို ကွောကျလို့ Password တောငျးတာ ဆိုရငျလညျး ကိုယျ့ဘဲက လှယျလှယျ သာယာ တတျတဲ့ စောကျသုံးမကတြဲ့ ကောငျလို့ ပွောလိုကျတာနဲ့ အတူတူပါပဲ ။
ကိုယျ့ဘကျ ပွနျကွညျ့ရငျလညျး ဒီယောကျြားကိုမှ မရရငျ ဘဝဆုံးတော့မှာ မို့လို့ အတငျး တှယျကပျနမှေ ဖွဈမှာ မို့လို့ပါလို့ ဝနျခံလိုကျတဲ့ သဘော ဖွဈမသှားဘူးလား ။ နှဈယောကျစလုံးက စောကျသုံး မကတြဲ့ လူတှပေါလို့ ဝနျခံလိုကျတဲ့ သဘော ဖွဈသှားတာပါပဲ ။ ကိုယျ့ရဲ့ Social Media account ထဲမှာ အပေါငျးအသငျးတှနေဲ့ တိုငျပငျခငျြ၊ ပွောခငျြတဲ့စကားတှေ ရှိမယျ ။
Like နှိပျခငျြတဲ့ Page တှေ ရှိရငျ ရှိမယျ ။ မိသားစု အိမျတှငျးရေး ကိစ်စတှေ ရှိရငျ ရှိမယျ ။ အလုံးစုံ တိုငျပငျလို့ရတဲ့ သူငယျခငျြး ဆိုတာတှေ ရှိရငျ ရှိမယျ ။ စိတျလှတျ ကိုယျလှတျ ဘျောဒါတှနေဲ့ အယုတ်တ အနတ်တတှေ ပွောခငျြရငျ ပွောမယျ ။
ရညျးစား ဖွဈသှားပွီ ဆိုတာနဲ့ အဲ့ဒီ့ ရညျးစားက ဘကျစုံကိစ်စတိုငျးကို ဖွရှေငျးပေးမယျ့ ကိုယျ့အဖေ ၊ ကိုယျ့အမေ ၊ ကိုယျ့အဈကို ၊ ကိုယျ့သူငယျခငျြး ဖွဈသှားတာမြိုး မဟုတျဘူး ။
ရညျးစားသညျ စှယျစုံရ ပုဂ်ဂိုလျ မဟုတျပါ။
သမီးရညျးစား ထားတယျ ဆိုတာ ဘဝမှာ ကွုံသမြှ ကိစ်စ အကွီး ၊ အသေးတိုငျး ဒီရညျးစားနဲ့ပဲ တိုငျပငျရမယျ လို့ ခေါငျးစဉျ တပျပေးလိုကျတာ မဟုတျဘူး ။ ရညျးစားဆိုတာ ကိုယျ့လကျတှဲဖျောလို့ သတျမှတျလို့ ရပမေယျ့ ကိစ်စတိုငျး အဲ့ဒီ့ ရညျးစားက ဖွရှေငျးပေးနိုငျတာ မဟုတျဘူး ။
တခြို့ ယောကျြားလေး အခငျြးခငျြး၊ မိနျးခလေး အခငျြးခငျြးပဲ နားလညျတဲ့ ကိစ်စမြိုး ၊ ကိုယျ့ရညျးစား သိလညျး အကြိူးမရှိမယျ့ ကိစ်စမြိူးတှေ ၊ ယောကျြားမိနျးမ မတူညီတဲ့ လူမှုရေး အခကျအခဲတှေ ၊ ပွောရရငျ ခေါငျးစဉျတှေ တျောတျောမြားမြား ကနျြဦးမယျ ။
အဲ့ကိစ်စတိုငျးကို ရညျးစားဆိုတဲ့ တယောကျက ဟပျခလြောငျး ဆိုပွီး ဖွရှေငျးပေးနိုငျတာ မဟုတျသလို အဲ့ဒီ ရညျးစားပါလာမှ ပိုရှုတျကုနျမှာတှေ အမြားကွီး ။
အဲဒီ ကိစ်စတှကေ Fb Password နဲ့ ဘာဆိုငျလို့လဲ လို့ မေးစရာ ရှိတယျ ။ သိပျဆိုငျတာပေါ့။ ပွဿနာ အကွီးအမား ဆိုတာတှေ အားလုံးက " အမှိုကျကစ၊ ပွဿဒျ မီးလောငျ " အသေးအမှား ဆိုတာကနပေဲ စကွတာ ။ အဲ့ဒီ့ အသေးအမှား ဆိုတာကလညျး ဒီဘကျခတျေ Social Media အပျေါမှာ ဖွဈနတေဲ့ ကိစ်စတှကေနပေဲ ဖွဈကွတာ ခညျြးပဲ ။
ဒီသူငယျခငျြးနဲ့ ပေါငျးတာ မကွိုကျဘူး ။ ဒီလူနဲ့ စကားပွောတာ မကွိုကျဘူး။ ဘာလို့ ဒီ Group ထဲ ဝငျထားတာလဲ ။ ရှငျ့ညီမက မုနျ့ဖိုးပဲ တောငျးနတောပဲ ။ အဲ့ဒီ ဆဲပဲ ဆဲနတေဲ့ကောငျကို ဘလော့စမျးပါ ။ မငျးရုံးက ကောငျက ည ၉ နာရီလောကျလညျး စကား လာပွောတာပဲလား ။ အဲ့ကောငျ ပိုကျဆံခညျြးတဲ့ ကိစ်စပွောနတော ဘာကွောငျ့လဲ ။
ဘာမှတဲ့ သေးသေး မှားမှားလေးတှကေ စောကျပွဿနာ အကွီးကွီးတှေ တကျမယျ့ ခေါငျးစဉျတှေ ခညျြးပဲ ။ လကျထပျဖို့က နောကျထား ၊ ပြျောခငျြလို့ ရညျးစားထားပါတယျ ဆိုတဲ့ အဆငျ့မှာ ကတညျးကတငျ ကိုယျ့ရညျးစားက ဝငျစှကျဖကျလို့ စိတျတှေ မှနျးကွပျပွီး ပြျောရှငျမှု ဆိုတာ စတငျ ပြောကျဆုံးနေ ရပွီ ။
ကဲ .... မလှနျဆနျနိုငျလို့ သူပွောတဲ့အတိုငျး လိုကျလြောပေးပွီး Block တာတှေ၊ စကားမပွောတာတှေ၊ unfriend လုပျတာတှေ လုပျပေးလိုကျရတယျ ပဲ ဆိုပါစို့ ။ အဲ့လူက စိတျထဲ ကနြေပျပါ ဦးမလား ။ ဘာမဟုတျတဲ့ ကိစ်စလေးနဲ့ အကုနျ လိုကျလြောပေးနရေတယျ ဆိုပွီး မှနျးကွပျလာမှာပဲ ။ လဗေူပေါငျးက ဒီတိုငျးထားလို့ မပေါကျကှဲဘူး ။ တငျးတငျး ကွပျကွပျ အဖွဈညှဈ ခံရတော့မှ ပေါကျကှဲတာမြိူးပဲ ။ လူ့စိတျ ဆိုတာလညျး အဲ့သဘောပဲ ။
ဇယား ရှုပျခငျြတဲ့လူက ရှုပျမှာပဲ ။ ကိုယျဘယျလောကျ ထိနျးထိနျး အကောငျ့ သဈဖှငျ့ပွီး ခွရှေုပျမှာပဲ ။ ဇယားရှုပျမယျ့လူက ဖှဘုတျတငျ မကဘူး ၊ အပွငျလောကမှာလညျး ဇယားရှုပျမှာပဲ ။ တားလို့ရမှာ မဟုတျဘူး ။ အဲ့လို စရိုကျမကောငျး ၊ ဇယားရှုပျတဲ့ လူမြိုး ဆိုရငျတော့ password ကိစ်စတှေ အသာ ထားဦး ။ တဘဝလုံး လကျတှဲမလား ။ စဉျးစားပေါ့ ။
ခွမေရှုပျတဲ့လူ ဖွဈနရေငျတောငျ တဈခါတဈလေ ကိုယျ့အကောငျ့က တခွားလူ တဈယောကျ ဝငျကွညျ့နိုငျတယျဆိုတာ သိကွညျ့ပါလား ။ ဘယျလောကျတောငျ မှနျးကွပျလိုကျမလဲ ။ အပေါငျးအသငျးနဲ့ စကားပွောရငျး ကိုယျ့ရညျးစားအကွောငျး ပါလာရငျ စကားက ဆကျမပွောရဲတော့ တာမြိူး ၊ မဟုတျတမျးတရားတှေ ပွောရတာမြိူး ၊ အဆငျမပွတေဲ့ အကွောငျးတှေ ရငျဖှငျ့ခငျြတာ မြိူးတှေ မလုပျရတဲ့ အခါ ဘယျလောကျတောငျ မှနျးကွပျ လိုကျမလဲ စဉျးစားကွညျ့ပေါ့ ။
အဲ့တော့ လှတျလှတျ လပျလပျ ဖှဘုတျသုံးဖို့ အကောငျ့သဈ ဖှငျ့ထားတာ ကိုသာ ကိုယျ့ရညျးစားက သိကွညျ့ပါလား ။ မိုးမီးလောငျပွီး စောကျပွဿနာတှေ ပိုတောငျ တကျကုနျဦးမယျ ။ အရငျတုနျး က ပေးထားပွီး အခုဟာကို အသိမပေးတော့ဘူး ဆိုတော့ ခွရှေုတျတာလား ဆိုပွီး သံသယဝငျ ကွ ၊ အစှတျစှဲ ခံရတဲ့ဘကျကလညျး ငါလညျး ဘာမှမလုပျဘဲနဲ့ ဒီလောကျထိဖွဈခငျြတာလား ၊ ပွတျကှာ ဆိုပွီး ပွတျဆဲကွ ။ စောကျလုပျတှကေို ရှုတျနတောပဲ ။
တနတေ့နေ့ Bus ပျေါတှမှော အတှဲတှေ ရနျဖွဈလို့ အသံ မကွားလိုကျနဲ့ ။ အဲ့ဒီ့ဖှဘုတျ password ပေးတဲ့ကိစ်စနဲ့ ၊ password ပွောငျးတဲ့ ကိစ်စနဲ့ ဘေးပတျဝနျးကငျြတောငျ ဂရုမစိုကျဘဲ သတျနကွေတာ။ ကိုယျ့အရှကျကိုယျ ခှဲနကွေတာခညျြးပဲ ။
တကယျတမျး ၂ ယောကျသား ရနျဖွဈကွညျ့၊ ၂ ယောကျ စလုံးက စိတျတှေ မှနျးကွပျနရေငျ ဘယျသူ့ဘကျကမှ လြှော့ကွတော့မှာ မဟုတျဘူး ။ ငါ့တုနျးက ကိစ်စတိုငျး လိုကျလြော့ပေးထား ခဲ့ရတာ ၊ ဒီတုနျးက ဘယျလို ၊ ဟိုတုနျးက ဘယျလို ၊ သညျးငွီး ခံတာ မြားပွီ ၊ ဘာညာနဲ့ ပွတျဆဲတဲ့ အထိ ရောကျကုနျမှာပဲ ။
ယောကျြားဖွဈဖွဈ ၊ မိနျးမဖွဈဖွဈ ... Personal ဆိုတာ ရှိတယျ ... Privacy ဆိုတာ ရှိတယျ ။ Personal နဲ့ Love က ဘာမှ အကနျ့ရောစရာကို မရှိတာ ။ တကယျခဈြရငျ ကိုယျ့ဘကျက လုပျပေးရမှာတှေ အမြားကွီး ။ ကိုယျ့ရဲ့ Personal ကိုမှ ပေးပွီး ကိုယျ့စိတျကိုယျကို မှနျးကွပျအောငျ လုပျခွငျးက ၂ ယောကျစလုံးအတှကျ ရရှေညျမှာ ရှထှေကျလာမှာ မဟုတျဘူး ။
တဈသကျလုံး အတူနလောတဲ့ ကိုယျ့မိသားစု၊ ကိုယျ့ညီအဈကို မောငျနှမတောငျ ပေးမသိတဲ့ ကိစ်စကို အခုမှ ဘဝထဲ ဝငျလာတဲ့သူ တယောကျကို ဘာလို့ ပေးသိရမှာတုနျး ။
မဟျောသဓာတောငျ မိမိရဲ့ လှိူ့ဝှကျတဲ့ အကွောငျးကို ဘယျသူ့ကို တိုငျပငျသငျ့လဲ ဆိုတာကို ဘယျလို ဖွရှေငျးခဲ့သလဲ ကွညျ့ ။ သိနျး၊ ဒမေိနျး၊ ကာဝိနျး၊ ပဂုဒျ အမတျကွီး (၄) ယောကျ၊ မိမိအကွောငျး သူမြားသိတော့ ဘာအကြိူးအမွတျမှ မရှိဘဲ သောကျရှကျ ကှဲတာပဲ အဖကျတငျခဲ့ သလိုပေါ့ ။
ကိုယျ့ရဲ့ Personal ကိုယျ့ရဲ့ Privacy ကို ဒီရညျးစား ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျကွောငျ့ အကုနျ ခပြွစရာကို မလိုတာဗြာ ။ ပေးသိပွီး ရှထှေကျနရေငျတော့ တမြိူးပေါ့ ။ ပေးသိလိုကျပွီးမှ စိတျမှနျးကွပျတာတှေ၊ မလှတျလပျတာတှေ ၊ ပွဿနာတကျမှာတှပေဲ ရမယျ့ ဒီကိစ်စမြိူးက စောစောစီးစီးကတညျးက အပွတျဖွတျထားရမှာ ။ ရညျးစားဖွဈရငျ Password အလဲအလှယျ လုပျရမယျ့ ဆိုတဲ့ အယူမှားကွီးကို ရညျးစား မဖွဈခငျကတညျးက အပွတျ ရှငျးထားရမှာ ။
ကိုယျတှေ အတှဲကတော့ ရှငျးတယျ ။ ရညျးစားဖွဈပွီး တဈနှဈခှဲကြျော ပွီးတဲ့အပွငျ ဒီနှဈထဲမှာ အိမျထောငျပွုဖို့တောငျ စီစဉျပွီးပွီ ။ အခုထိ တယောကျဖှဘုတျ password ပေးဖို့ မပွောနဲ့၊ အနားလာပွီး သူ့အကောငျ့ဖှငျ့သုံးနရေငျတောငျ မကျြစိလေး စှပွေီး မကွညျ့ဘူး ။ သူက ကွညျ့ပါဦး ဆိုပွီး လာပွရငျတော့ ကွညျ့ပေးလိုကျတယျ ။
သူလညျး ကိုယျ့အပျေါ ထားတဲ့ သဘောထားက အဲ့အတိုငျးပဲ ။ ကိုယျ့အခနျးထဲ ဖှဘုတျအကောငျ့ ဖှငျ့ထားပွီး အိမျထဲ လြှောကျသှားနရေငျတောငျ ယောငျလို့ တဈခကျြ ဝငျမစပျစုဘူး ။ အဲ့တော့ ဘာဖွဈလဲ ။
သူနဲ့ ကိုယျ့မှာ စဈမှနျတဲ့ ယုံကွညျမှု ဆိုတာကို တညျဆောကျပွီးသား ဖွဈသှားတာပဲ ။ အပွနျအလှနျ ယုံကွညျလို့ ရပါလား ဆိုတဲ့ စိတျခံစားခကျြ အပွညျ့ရသှားတာပဲ ။ တကယျ လိုအပျလာရငျ၊ တိုငျပငျခငျြ လာရငျ ပွောပွမှာပဲ ။ ကိုယျက အတငျးအကွပျကွီး သှားပွီး လုကွညျ့နစေရာကို မလိုတာ ။
တကယျ့ Life မှာ လူနှဈယောကျ ပေါငျးဖကျတဲ့ အခါ အဲ့ထကျကွီးတဲ့ ပွဿနာတှေ အခကျအခဲပေါငျး သောငျးခွောကျထောငျ ကွုံရဦးမှာ ။ စားဝတျနရေေး ၊ လူမှုရေး ၊ စီးပှားရေး ၊ နှဈဖကျမိသားစုအရေး ၊ သားရေးသမီးရေး၊ အဲ့လို အရေး အရာပေါငျး မြားစှာကို ဒီနှဈယောကျကပဲ အတူတူ ရငျဆိုငျ ဖွရှေငျးရမှာ ။
အဲ့လို ရရှေညျသှားမယျ့ သူက အခုအခြိနျ ကတညျးက မယုံကွညျ ရရငျ၊ ဇယားရှုတျမှာ ကွောကျနရေရငျ၊ နောကျလူနောကျ လှယျလှယျ ပါသှားမှာ ကွောကျနရေရငျ ၊ ကိုယျ့ Privacy ကို အခုကတညျးက အတငျးအကွပျ ဆှကျဖကျမယျ့လူ ဖွဈနရေငျ ကိုယျနဲ့ မထိုကျတနျတဲ့သူ လို့သာ တှေးပွီး စောစော စီးစီးသာ ဇာတျလမျး ဖွတျလိုကျကွ ပါတော့ ။ ဒီလောကျလေးတောငျ ခံနိုငျရညျ မရှိရငျ လောကဒဏျကို နှဈယောကျ အတူ ဘယျလို ရငျဆိုငျကွမှာတုနျး ။
Personal ကို စှကျဖကျတဲ့ Love ဆိုရငျတော့ အစဈ ၊ ဟုတျမဟုတျ ၊ ကိုယျ့ဘာသာ ပွနျ သုံးသပျကွညျ့ကွပါလော့ ။ Personal နဲ့ Love ခှဲခွားနိုငျကွပါစဗြော ။
ရည်းစား ဖြစ်တာနဲ့ Fb Password ပေးသင့်လား
မြန်မာနိုင်ငံက သမီးရည်းစား စုံတွဲတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ လုံးဝ နားမလည်နိုင်တဲ့ အချက်တခု ရှိတယ် ။
အဲ့ဒါက ရည်းစား ဖြစ်ပြီ ဆိုတာနဲ့ တယောက်နဲ့ တယောက် Fb Password အပြန်အလှန် ပေးကြတဲ့ ကိစ္စပဲ ။ ရည်းစားတွေ ဖြစ်ကြပြီ ဆိုတာနဲ့ ဒီလို မဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ် ဆိုတဲ့ အယူမှားကြီးက မြန်မာလူငယ်အတွဲတွေ ထဲမှာ အမြင်ရဆုံး အဆိုးဆုံး ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်နေသလိုပဲ ။ လုံးဝ အဓိပ္ပါယ် မရှိပါဘူး ။
ရည်းစားထားတယ် ဆိုတာကို ပြန်စမ်းစစ် ကြည့်ရင် အရေးကြီးဆုံး အကြောင်းပြချက် (၂) ခုပဲ ရှိတယ် ။ တခုက ပျော်ချင်လို့၊ နောက်တခုက တစ်ဘဝလုံး အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး လက်တွဲချင်လို့ ။
တယောက်နဲ့ တယောက် အပြန်အလှန် Password တွေ ပေးထားကြတဲ့ စုံတွဲတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် နောက်ထပ် ယောက်ျားလေး ၊ မိန်းကလေးတွေနဲ့ စကားမပြောစေချင်လို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် ရယ် ၊ နောက်ပြီး အဓိက အဆိုးရွားဆုံး အယူလွဲမှု ကတော့ တယောက်နဲ့ တယောက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ချင်လို့ ပေးတယ်လို့ ပြောကြတာပဲ ။ လုံးဝ အမှားကြီး ။
အဲ့ဒါ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်တာ မဟုတ်ဘူး ။ တယောက်နဲ့ တယောက် မယုံကြည်ဘူး ဆိုတာကို အချက်ပြလိုက် တာပဲ ။
ပြန်စဉ်းစားကြည့်လေ ။ ကွယ်ရာမှာ နောက်တယောက်နဲ့ ဖောက်ပြန်နေမလား မသိဘူး ဆိုတဲ့ မယုံကြည်တဲ့ စိတ်ကြောင့် ရည်းစားစ ဖြစ်တာနဲ့ ဒီ Social Media password ကို တောင်းတော့တာပေါ့ ။
အဲ့လောက်ထိ ကိုယ့်တယောက်ထဲကိုမှ ချစ်နိုင်ပါ့မလား မသေချာတဲ့ ၊ မယုံရတဲ့ လူတယောက်ကို ဘာလို့ ရည်းစားတော် တော့မလဲ ။ ရှင်းနေတာကို ။
တဘဝလုံးအတွက် မပြောနဲ့ ။ အခုကတည်းက တခြား မိန်းကလေး၊ တခြား ယောက်ျားလေးနဲ့ စကားပြောပြီး ပါသွားမှာ ကြောက်လို့ ဆိုရင် အခုကတည်းက လမ်းသာ ခွဲပလိုက်တော့ ။
ကိုယ့်ကို ချစ်ပါတယ်လို့ ပြောထားတဲ့ ယောက်ျားက နောက်ထပ် မိန်းကလေးနဲ့ စကားပြောလိုက်တာနဲ့ ပါသွားမယ့်လူ လို့ ထင်နေရင် အစ ကတည်းက တွဲမနေနဲ့ပေါ့ ။ ကိုယ်နဲ့ မထိုက်တဲ့လူ ၊ ကိုယ့်အဆင့်ကို မမှီတဲ့သူလို့ စိတ်ထဲမှတ်ပြီး စောစော စီးစီး လွှတ်ပေးလိုက် ။ နောက်တစ်ယောက် ရှာဖို့တောင် အချိန် ရသေး ။
ကိုယ့်ဘဲကိုတော့ ယုံပါရဲ့ ။ သူ့နားက စနိုက်ကြော်မ တွေကို ကြောက်လို့ Password တောင်းတာ ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ဘဲက လွယ်လွယ် သာယာ တတ်တဲ့ စောက်သုံးမကျတဲ့ ကောင်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ ။
ကိုယ့်ဘက် ပြန်ကြည့်ရင်လည်း ဒီယောက်ျားကိုမှ မရရင် ဘဝဆုံးတော့မှာ မို့လို့ အတင်း တွယ်ကပ်နေမှ ဖြစ်မှာ မို့လို့ပါလို့ ဝန်ခံလိုက်တဲ့ သဘော ဖြစ်မသွားဘူးလား ။ နှစ်ယောက်စလုံးက စောက်သုံး မကျတဲ့ လူတွေပါလို့ ဝန်ခံလိုက်တဲ့ သဘော ဖြစ်သွားတာပါပဲ ။ ကိုယ့်ရဲ့ Social Media account ထဲမှာ အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ တိုင်ပင်ချင်၊ ပြောချင်တဲ့စကားတွေ ရှိမယ် ။
Like နှိပ်ချင်တဲ့ Page တွေ ရှိရင် ရှိမယ် ။ မိသားစု အိမ်တွင်းရေး ကိစ္စတွေ ရှိရင် ရှိမယ် ။ အလုံးစုံ တိုင်ပင်လို့ရတဲ့ သူငယ်ချင်း ဆိုတာတွေ ရှိရင် ရှိမယ် ။ စိတ်လွတ် ကိုယ်လွတ် ဘော်ဒါတွေနဲ့ အယုတ္တ အနတ္တတွေ ပြောချင်ရင် ပြောမယ် ။
ရည်းစား ဖြစ်သွားပြီ ဆိုတာနဲ့ အဲ့ဒီ့ ရည်းစားက ဘက်စုံကိစ္စတိုင်းကို ဖြေရှင်းပေးမယ့် ကိုယ့်အဖေ ၊ ကိုယ့်အမေ ၊ ကိုယ့်အစ်ကို ၊ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း ဖြစ်သွားတာမျိုး မဟုတ်ဘူး ။
ရည်းစားသည် စွယ်စုံရ ပုဂ္ဂိုလ် မဟုတ်ပါ။
သမီးရည်းစား ထားတယ် ဆိုတာ ဘဝမှာ ကြုံသမျှ ကိစ္စ အကြီး ၊ အသေးတိုင်း ဒီရည်းစားနဲ့ပဲ တိုင်ပင်ရမယ် လို့ ခေါင်းစဉ် တပ်ပေးလိုက်တာ မဟုတ်ဘူး ။ ရည်းစားဆိုတာ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်လို့ သတ်မှတ်လို့ ရပေမယ့် ကိစ္စတိုင်း အဲ့ဒီ့ ရည်းစားက ဖြေရှင်းပေးနိုင်တာ မဟုတ်ဘူး ။
တချို့ ယောက်ျားလေး အချင်းချင်း၊ မိန်းခလေး အချင်းချင်းပဲ နားလည်တဲ့ ကိစ္စမျိုး ၊ ကိုယ့်ရည်းစား သိလည်း အကျိူးမရှိမယ့် ကိစ္စမျိူးတွေ ၊ ယောက်ျားမိန်းမ မတူညီတဲ့ လူမှုရေး အခက်အခဲတွေ ၊ ပြောရရင် ခေါင်းစဉ်တွေ တေ်ာတော်များများ ကျန်ဦးမယ် ။
အဲ့ကိစ္စတိုင်းကို ရည်းစားဆိုတဲ့ တယောက်က ဟပ်ချလောင်း ဆိုပြီး ဖြေရှင်းပေးနိုင်တာ မဟုတ်သလို အဲ့ဒီ ရည်းစားပါလာမှ ပိုရှုတ်ကုန်မှာတွေ အများကြီး ။
အဲဒီ ကိစ္စတွေက Fb Password နဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ လို့ မေးစရာ ရှိတယ် ။ သိပ်ဆိုင်တာပေါ့။ ပြဿနာ အကြီးအမား ဆိုတာတွေ အားလုံးက " အမှိုက်ကစ၊ ပြဿဒ် မီးလောင် " အသေးအမွှား ဆိုတာကနေပဲ စကြတာ ။ အဲ့ဒီ့ အသေးအမွှား ဆိုတာကလည်း ဒီဘက်ခေတ် Social Media အပေါ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေကနေပဲ ဖြစ်ကြတာ ချည်းပဲ ။
ဒီသူငယ်ချင်းနဲ့ ပေါင်းတာ မကြိုက်ဘူး ။ ဒီလူနဲ့ စကားပြောတာ မကြိုက်ဘူး။ ဘာလို့ ဒီ Group ထဲ ဝင်ထားတာလဲ ။ ရှင့်ညီမက မုန့်ဖိုးပဲ တောင်းနေတာပဲ ။ အဲ့ဒီ ဆဲပဲ ဆဲနေတဲ့ကောင်ကို ဘလော့စမ်းပါ ။ မင်းရုံးက ကောင်က ည ၉ နာရီလောက်လည်း စကား လာပြောတာပဲလား ။ အဲ့ကောင် ပိုက်ဆံချည်းတဲ့ ကိစ္စပြောနေတာ ဘာကြောင့်လဲ ။
ဘာမှတဲ့ သေးသေး မွှားမွှားလေးတွေက စောက်ပြဿနာ အကြီးကြီးတွေ တက်မယ့် ခေါင်းစဉ်တွေ ချည်းပဲ ။ လက်ထပ်ဖို့က နောက်ထား ၊ ပျော်ချင်လို့ ရည်းစားထားပါတယ် ဆိုတဲ့ အဆင့်မှာ ကတည်းကတင် ကိုယ့်ရည်းစားက ဝင်စွက်ဖက်လို့ စိတ်တွေ မွန်းကြပ်ပြီး ပျော်ရွှင်မှု ဆိုတာ စတင် ပျောက်ဆုံးနေ ရပြီ ။
ကဲ .... မလွန်ဆန်နိုင်လို့ သူပြောတဲ့အတိုင်း လိုက်လျောပေးပြီး Block တာတွေ၊ စကားမပြောတာတွေ၊ unfriend လုပ်တာတွေ လုပ်ပေးလိုက်ရတယ် ပဲ ဆိုပါစို့ ။ အဲ့လူက စိတ်ထဲ ကျေနပ်ပါ ဦးမလား ။ ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိစ္စလေးနဲ့ အကုန် လိုက်လျောပေးနေရတယ် ဆိုပြီး မွန်းကြပ်လာမှာပဲ ။ လေဗူပေါင်းက ဒီတိုင်းထားလို့ မပေါက်ကွဲဘူး ။ တင်းတင်း ကြပ်ကြပ် အဖြစ်ညှစ် ခံရတော့မှ ပေါက်ကွဲတာမျိူးပဲ ။ လူ့စိတ် ဆိုတာလည်း အဲ့သဘောပဲ ။
ဇယား ရှုပ်ချင်တဲ့လူက ရှုပ်မှာပဲ ။ ကိုယ်ဘယ်လောက် ထိန်းထိန်း အကောင့် သစ်ဖွင့်ပြီး ခြေရှုပ်မှာပဲ ။ ဇယားရှုပ်မယ့်လူက ဖွဘုတ်တင် မကဘူး ၊ အပြင်လောကမှာလည်း ဇယားရှုပ်မှာပဲ ။ တားလို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး ။ အဲ့လို စရိုက်မကောင်း ၊ ဇယားရှုပ်တဲ့ လူမျိုး ဆိုရင်တော့ password ကိစ္စတွေ အသာ ထားဦး ။ တဘဝလုံး လက်တွဲမလား ။ စဉ်းစားပေါ့ ။
ခြေမရှုပ်တဲ့လူ ဖြစ်နေရင်တောင် တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်အကောင့်က တခြားလူ တစ်ယောက် ဝင်ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတာ သိကြည့်ပါလား ။ ဘယ်လောက်တောင် မွန်းကြပ်လိုက်မလဲ ။ အပေါင်းအသင်းနဲ့ စကားပြောရင်း ကိုယ့်ရည်းစားအကြောင်း ပါလာရင် စကားက ဆက်မပြောရဲတော့ တာမျိူး ၊ မဟုတ်တမ်းတရားတွေ ပြောရတာမျိူး ၊ အဆင်မပြေတဲ့ အကြောင်းတွေ ရင်ဖွင့်ချင်တာ မျိူးတွေ မလုပ်ရတဲ့ အခါ ဘယ်လောက်တောင် မွန်းကြပ် လိုက်မလဲ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ ။
အဲ့တော့ လွတ်လွတ် လပ်လပ် ဖွဘုတ်သုံးဖို့ အကောင့်သစ် ဖွင့်ထားတာ ကိုသာ ကိုယ့်ရည်းစားက သိကြည့်ပါလား ။ မိုးမီးလောင်ပြီး စောက်ပြဿနာတွေ ပိုတောင် တက်ကုန်ဦးမယ် ။ အရင်တုန်း က ပေးထားပြီး အခုဟာကို အသိမပေးတော့ဘူး ဆိုတော့ ခြေရှုတ်တာလား ဆိုပြီး သံသယဝင် ကြ ၊ အစွတ်စွဲ ခံရတဲ့ဘက်ကလည်း ငါလည်း ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ ဒီလောက်ထိဖြစ်ချင်တာလား ၊ ပြတ်ကွာ ဆိုပြီး ပြတ်ဆဲကြ ။ စောက်လုပ်တွေကို ရှုတ်နေတာပဲ ။
တနေ့တနေ့ Bus ပေါ်တွေမှာ အတွဲတွေ ရန်ဖြစ်လို့ အသံ မကြားလိုက်နဲ့ ။ အဲ့ဒီ့ဖွဘုတ် password ပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ ၊ password ပြောင်းတဲ့ ကိစ္စနဲ့ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တောင် ဂရုမစိုက်ဘဲ သတ်နေကြတာ။ ကိုယ့်အရှက်ကိုယ် ခွဲနေကြတာချည်းပဲ ။
တကယ်တမ်း ၂ ယောက်သား ရန်ဖြစ်ကြည့်၊ ၂ ယောက် စလုံးက စိတ်တွေ မွန်းကြပ်နေရင် ဘယ်သူ့ဘက်ကမှ လျှော့ကြတော့မှာ မဟုတ်ဘူး ။ ငါ့တုန်းက ကိစ္စတိုင်း လိုက်လျော့ပေးထား ခဲ့ရတာ ၊ ဒီတုန်းက ဘယ်လို ၊ ဟိုတုန်းက ဘယ်လို ၊ သည်းငြီး ခံတာ များပြီ ၊ ဘာညာနဲ့ ပြတ်ဆဲတဲ့ အထိ ရောက်ကုန်မှာပဲ ။
ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ် ၊ မိန်းမဖြစ်ဖြစ် ... Personal ဆိုတာ ရှိတယ် ... Privacy ဆိုတာ ရှိတယ် ။ Personal နဲ့ Love က ဘာမှ အကန့်ရောစရာကို မရှိတာ ။ တကယ်ချစ်ရင် ကိုယ့်ဘက်က လုပ်ပေးရမှာတွေ အများကြီး ။ ကိုယ့်ရဲ့ Personal ကိုမှ ပေးပြီး ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကို မွန်းကြပ်အောင် လုပ်ခြင်းက ၂ ယောက်စလုံးအတွက် ရေရှည်မှာ ရွှေထွက်လာမှာ မဟုတ်ဘူး ။
တစ်သက်လုံး အတူနေလာတဲ့ ကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်ညီအစ်ကို မောင်နှမတောင် ပေးမသိတဲ့ ကိစ္စကို အခုမှ ဘဝထဲ ဝင်လာတဲ့သူ တယောက်ကို ဘာလို့ ပေးသိရမှာတုန်း ။
မဟော်သဓာတောင် မိမိရဲ့ လှိူ့ဝှက်တဲ့ အကြောင်းကို ဘယ်သူ့ကို တိုင်ပင်သင့်လဲ ဆိုတာကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းခဲ့သလဲ ကြည့် ။ သိန်း၊ ဒေမိန်း၊ ကာဝိန်း၊ ပဂုဒ် အမတ်ကြီး (၄) ယောက်၊ မိမိအကြောင်း သူများသိတော့ ဘာအကျိူးအမြတ်မှ မရှိဘဲ သောက်ရှက် ကွဲတာပဲ အဖက်တင်ခဲ့ သလိုပေါ့ ။
ကိုယ့်ရဲ့ Personal ကိုယ့်ရဲ့ Privacy ကို ဒီရည်းစား ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကြောင့် အကုန် ချပြစရာကို မလိုတာဗျာ ။ ပေးသိပြီး ရွှေထွက်နေရင်တော့ တမျိူးပေါ့ ။ ပေးသိလိုက်ပြီးမှ စိတ်မွန်းကြပ်တာတွေ၊ မလွတ်လပ်တာတွေ ၊ ပြဿနာတက်မှာတွေပဲ ရမယ့် ဒီကိစ္စမျိူးက စောစောစီးစီးကတည်းက အပြတ်ဖြတ်ထားရမှာ ။ ရည်းစားဖြစ်ရင် Password အလဲအလှယ် လုပ်ရမယ့် ဆိုတဲ့ အယူမှားကြီးကို ရည်းစား မဖြစ်ခင်ကတည်းက အပြတ် ရှင်းထားရမှာ ။
ကိုယ်တွေ အတွဲကတော့ ရှင်းတယ် ။ ရည်းစားဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ခွဲကျော် ပြီးတဲ့အပြင် ဒီနှစ်ထဲမှာ အိမ်ထောင်ပြုဖို့တောင် စီစဉ်ပြီးပြီ ။ အခုထိ တယောက်ဖွဘုတ် password ပေးဖို့ မပြောနဲ့၊ အနားလာပြီး သူ့အကောင့်ဖွင့်သုံးနေရင်တောင် မျက်စိလေး စွေပြီး မကြည့်ဘူး ။ သူက ကြည့်ပါဦး ဆိုပြီး လာပြရင်တော့ ကြည့်ပေးလိုက်တယ် ။
သူလည်း ကိုယ့်အပေါ် ထားတဲ့ သဘောထားက အဲ့အတိုင်းပဲ ။ ကိုယ့်အခန်းထဲ ဖွဘုတ်အကောင့် ဖွင့်ထားပြီး အိမ်ထဲ လျှောက်သွားနေရင်တောင် ယောင်လို့ တစ်ချက် ဝင်မစပ်စုဘူး ။ အဲ့တော့ ဘာဖြစ်လဲ ။
သူနဲ့ ကိုယ့်မှာ စစ်မှန်တဲ့ ယုံကြည်မှု ဆိုတာကို တည်ဆောက်ပြီးသား ဖြစ်သွားတာပဲ ။ အပြန်အလှန် ယုံကြည်လို့ ရပါလား ဆိုတဲ့ စိတ်ခံစားချက် အပြည့်ရသွားတာပဲ ။ တကယ် လိုအပ်လာရင်၊ တိုင်ပင်ချင် လာရင် ပြောပြမှာပဲ ။ ကိုယ်က အတင်းအကြပ်ကြီး သွားပြီး လုကြည့်နေစရာကို မလိုတာ ။
တကယ့် Life မှာ လူနှစ်ယောက် ပေါင်းဖက်တဲ့ အခါ အဲ့ထက်ကြီးတဲ့ ပြဿနာတွေ အခက်အခဲပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် ကြုံရဦးမှာ ။ စားဝတ်နေရေး ၊ လူမှုရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ နှစ်ဖက်မိသားစုအရေး ၊ သားရေးသမီးရေး၊ အဲ့လို အရေး အရာပေါင်း များစွာကို ဒီနှစ်ယောက်ကပဲ အတူတူ ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းရမှာ ။
အဲ့လို ရေရှည်သွားမယ့် သူက အခုအချိန် ကတည်းက မယုံကြည် ရရင်၊ ဇယားရှုတ်မှာ ကြောက်နေရရင်၊ နောက်လူနောက် လွယ်လွယ် ပါသွားမှာ ကြောက်နေရရင် ၊ ကိုယ့် Privacy ကို အခုကတည်းက အတင်းအကြပ် ဆွက်ဖက်မယ့်လူ ဖြစ်နေရင် ကိုယ်နဲ့ မထိုက်တန်တဲ့သူ လို့သာ တွေးပြီး စောစော စီးစီးသာ ဇာတ်လမ်း ဖြတ်လိုက်ကြ ပါတော့ ။ ဒီလောက်လေးတောင် ခံနိုင်ရည် မရှိရင် လောကဒဏ်ကို နှစ်ယောက် အတူ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ကြမှာတုန်း ။
Personal ကို စွက်ဖက်တဲ့ Love ဆိုရင်တော့ အစစ် ၊ ဟုတ်မဟုတ် ၊ ကိုယ့်ဘာသာ ပြန် သုံးသပ်ကြည့်ကြပါလော့ ။ Personal နဲ့ Love ခွဲခြားနိုင်ကြပါစေဗျာ ။
သငျသတိမထားမိတဲ့ နစေ့ဉျသုံးပစ်စညျး (၁၉) ခုရဲ့ သကျတမျးမြား
သူဌေးအတု နှငျ့ သူဌေးအစဈ
ခြိုငျးခြှေး အလှနျအကြှံထှကျတာကို ကာကှယျနိုငျမယျ့ လြှို့ဝှကျခကျြ (၇) ခု
၈ နှဈကွာ ကလေးထိနျးပေးတဲ့ အမြိုးသမီးကို စီးပှားရေးလုပျငနျးတှနေဲ့ ကားတှေ ဝယျပေးလိုကျတဲ့ အလုပျရှငျ